Shiinaha Nickel Chrome Resistance Alloys Warshadaha iyo Warshadda | TANKII
Bayonet Element Element
Fur gariiradda kululeeyaha
Quartz kululeeyaha infrared
Gariiradda kululaynta muquuninta
Dahaarka Daawaha Wire
FEP/PVC/PE/PFA Wire Wire
Fiberglass Wire Nalalka
Resistance Enamelled Wire
Silikoon Rubber ningax Wire
Fiilada Kordhinta Thermcouple
Nikkel 212 Silig
Silig Nadiir Daahir ah
Sax Wire Resistance
Fiilada iska caabinta Manganin
Sax Daawaha Wire
Resistance Kulaylka Wire
Wire FeCrAl Resistance
Fiilada iska caabinta Flat
Nichrome Resistance silig
Cidhifka Dabaysha Dabaysha
CU-Ni Silig Xiran
FeCrAl Wire Stranded
Dahaarani Silig Xaniban
Ni-Mn Alloy Wire Stranded
Nichrome Wire Stranded
Nickel Stranded Wire
Daawaha Nickel Chrome Resistance
Nichrome, oo sidoo kale loo yaqaan chrome nikkel, waa daawaha la soo saaray iyadoo la isku daray nikkel, chromium iyo, marmar, birta. Ugu wanaagsan ee loo yaqaan iska caabinta kulaylka, iyo sidoo kale iska caabbinta daxalka iyo oksaydhka labadaba, daawaha ayaa si aad ah waxtar ugu leh codsiyo badan. Laga soo bilaabo waxsoosaarka warshadaha ilaa shaqada hiwaayadda, nichrome oo ah qaab silig ah ayaa ku jira alaabooyin ganacsi oo kala duwan, farsamooyin iyo qalab. Waxay kaloo ka heshaa codsiyo goobo gaar ah.
Siligga Nichrome waa daawaha laga sameeyay nikkel iyo chromium. Waxay ka hortagtaa kulaylka iyo oksaydhka waxayna u adeegtaa sidii kuleyliyaha alaabada sida toasters -ka iyo qalajiyaha timaha. Dadka hiwaayadda leh waxay u isticmaalaan silig nichrome farshaxanka dhoobada iyo sameynta galaaska. Siligga waxaa kaloo laga heli karaa shaybaarrada, dhismaha iyo qalabka elektiroonigga ee gaarka ah.
Sababtoo ah siligga nichrome ayaa aad u adkaysi u leh korantada, aad bay waxtar ugu leedahay sida kuleyliyaha alaabada ganacsiga iyo aaladaha guriga. Toasters -ka iyo qallajiyeyaasha timaha waxay adeegsadaan xargaha silig nichrome si ay u abuuraan qaddar badan oo kuleyl ah, sida foornooyinka wax lagu dubto iyo kululeeyayaasha kaydinta. Foornooyinka warshadaha ayaa waliba isticmaala silig nichrome si ay u shaqeeyaan. Dhererka siligga nichrome ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu abuuro gooyo silig kulul, kaas oo loo adeegsan karo guriga ama goob warshadeed si loo gooyo loona qaabeeyo xumbo iyo caagag gaar ah.
Siligga Nichrome wuxuu ka samaysan yahay daawaha aan magnetka ahayn oo ka kooban nikkel, chromium, iyo bir. Nichrome waxaa lagu gartaa iska caabbinta sare iyo iska -caabbinta oksaydhka ee wanaagsan. Siligga Nichrome sidoo kale wuxuu leeyahay ductility wanaagsan ka dib isticmaalka iyo weldability aad u fiican.
Lambarka soo socda kadib nooca siligga Nichrome wuxuu muujinayaa boqolleyda nikkel ee ku jirta daawaha. Tusaale ahaan, "Nichrome 60" wuxuu ka kooban yahay qiyaas ahaan 60% nikkel.
Codsiyada siligga Nichrome waxaa ka mid ah walxaha kululaynta timo qalajiyaha, kuleyliyeyaasha kululaynta, iyo taageerada dhoobada ee kilyaha.
Max. Sii Socota
Heerkulka (° C)
Hore: Qiimaha macquulka ah ee Daawaha 270 - Soosaarka Shiinaha ee Daahfurka Nickel Wire Ni200 Wire for Filament - TANKII
Xiga: Alloys Aluminium Alloys Resistance Aluminum
80/20 Nickel Chrome Daawaha Wire
Nickel Daawaha 120
Nickel Daawaha 180
Dahaarka Nikel 200
Nickel Daawaha 201
Daaha nikkel 205
Daaha nikkel 270
Daawaha Nikel 30
Nickel Daawaha 60
Platinum Rhodium R Nooca Thermocouple Wire Nichr ...
Silig Resistance NiCr8020 /daawaha nichrome /ni80c ...
Daawaha 650, N8, Resistohm 80 Resistance ...
Bright NiCr8020/N8 Wire Alloy Wire for Sealer
Nickel Chromium Resistance Heat Resistance Alloy Electrica ...
NiCr 60/15 Nichrome Resistance Wire for PTC Heater
No.8, Laohuren Industrial Park, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha ee Xuzhou, Jiangsu, 221011 Shiinaha
No.388, Wadada Pangu, Degmada Baoshan, 201999, Shanghai, Shiinaha
Warshadda Tel:0086 516 8773 8786
Warshadda Tel:0086 150 0000 2421
Bayonet Element Element, Qaybaha kululaynta, Wire Resistance, Nickel Wire, Fur gariiradda kululeeyaha, Bayonet kululeeyaha,